ubusazi ukuba yeyiphi i-smartphone yokuqala?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba yeyiphi i-smartphone yokuqala?
Ngaba uyazi ukuba yeyiphi i-smartphone yokuqala?
Ii-Smartphones zisendleleni yokuba ziye kuyo yonke indawo-wonke umntu ubonakala ngathi sele enayo. Okungakumbi, akukho miqondiso ibonisa ukuba ukuthandwa kwabo kuya kuncipha nanini na. Kwakungekho njalo, njalo. Ngapha koko, igama & iiapos; ii-smartphone 'azikhange zibekho kude kube sekupheleni kweminyaka yama-90. Elo yayilixesha lokuba ii-smartphones zinokwenza kuphela iqhezu elincinci lezinto ezinakho ukwenziwa ngoogxa babo banamhlanje. Okwangoku, njengezokuqala (ngokwemilinganiselo yanamhlanje & apos) njengoko zazinjalo, bavule indlela yenani lezinto ezinempembelelo, eziguqula umdlalo ukuba zilandele. Ngaba unomdla wokufunda ngakumbi ngee-smartphones zokuqala? Kulungile, emva koko masibuyele umva siye kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo kwaye ubone ukuba iqale njani.
Eyokuqala & apos; iikhonsepthi ze-smartphone
Umfanekiso:1ye3Ukongezwa kokusebenza kwefowuni ethobekileyo nangaphesheya komnxeba wokufowuna yingcinga endala. Thatha umzekelo lo mxholo ngesixhobo esinokusebenza njengefowuni yomhlaba kunye nomncedisi wedijithali. Eyilwe ngescreen sokujongana nescreen, yayihambele phambili kakhulu ngexesha layo, kwaye ukugweba ngemifanekiso, ukusetyenziswa kwayo kubandakanya izinto ezinje ngokubhala iitsheki kunye nokugcina ulwazi loqhakamshelwano. Le fowuni ye-smartphone yacaciswa ngo-1983 yinkampani yaseJamani ebizwa ngokuba yi-frog design. Umthengi wayo yayiziiComputer zeApple, njengoko unokuxelelwa yi-logo yesikolo esidala. Awu, le ntlobo ye-smartphone ayizange ikhutshwe ngentengiso, kodwa ubukho bayo, kwinqanaba lokuqonda, iya kubonisa ukuba nakwiminyaka engama-30 eyadlulayo, abantu babone ukubakho kwesixhobo esidibanisa ukusebenza kweefowuni kunye nePDA. Kungathatha enye iminyaka eli-9 ukuba iselfowuni ilungele le nkcazo. Kwaye ayenziwanga yi-Apple.
Umfanekiso:1yeMbiniLe yi-IBM Simon yoNxibelelwano lwaBantu, ehlala ibizwa ngokuba yi-smartphone yokuqala. Iprototype yayo yaziswa ngo-1992, kodwa yayingeyiyo iminyaka emibini kamva xa iBellSouth Cellular ikhupha i-handset eMelika nge- $ 899 kwisivumelwano seminyaka emi-2 okanye i-1099 yeedola ngaphandle kokuzibophelela.
Ngamafutshane, i-IBM Simon yayiyiselfowni eneempawu zePDA- into ekufuneka bayonwabile abasebenzisi beshishini ngayo. USimon ubonelela ngezinto ezifana nekhalenda, iwotshi yehlabathi, kunye neshedyuli yokuqeshwa, inokuthumela kwaye ifumane ii-imeyile, inokutshintshana ngefeksi ngaphezulu kweemodem zayo ezingama-9600-bps, kwaye ikwazi nokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu ezigcinwe imemori khadi okanye kwi-1MB yayo yememori yangaphakathi. Eso sikrini sikhulu kakhulu ngaphambili siyi-monochrome, isibuko esingasemva esine-screen esine-pixels ezingama-160 ngama-293. Usebenzisa isiphatho esiphathwayo kunye neeapos, umntu wayenokuzoba iziketshi kunye negalelo lokubhaliweyo ngesandla, nangona uqikelelo lwethu kukuba ukuchaneka kwento yokugqibela kwakusenzeka.
Kwathengiswa iiyunithi ezingaphezu kwama-50 000 e-US de kwangoFebruwari 1995, xa umphathi waphelisa uSimon.
Umfanekiso:1ye4Kodwa ngelixa i-IBM Simon yayi, ngobuchwephesha, isixhobo sokuqala esiphathwayo esineentengiso esinokubizwa ngokuba yi-smartphone, bekungabhekiswa kuso. I-smartphone yokuqala eyathengiswa kusetyenziswa igama & iiapos; i-smartphone 'yayiyiNokia R380, eyafika kwintengiso ngo-2000 ngexabiso elimalunga ne- $ 700. Yayiyifowuni yokuqala yokusebenza kwe-Symbian.
Ngokungafaniyo nezinye ii-smartphones ngelo xesha, iNokia R380 yayimalunga nobukhulu kunye nobunzima beselfowuni eqhelekileyo. Inobunzima nje obuyi-164 yeegram, ngelixa iNokia 9210 Communicator, xa ithelekiswa, ibiyitena engama-244. Inqaku layo lenze ukuba libe sisixhobo esinomdla. I-R380 ibonakalise ikhiphedi yamanani esemgangathweni etyhila iscreen sokuphinda ubambe isikrini xa kuvuliwe.
Ubukrelekrele obubonakalayo, iNokia R380 yeza ilayishwe nge-arsenal yemisebenzi yomququzeleli, efana nekhalenda, uluhlu lwezinto eziza kwenziwa, iwotshi yehlabathi, iimemo zezwi, kunye nomphathi wezonxibelelwano. Ikwabonakalise izibuko elibomvu lokutshintshiselana ngedatha kwaye yanikezela ngemodem eyakhelweyo yokufikelela kwi-intanethi ngefowuni kunye ne-apos; s isikhangeli seWAP. Ukutshintsha ii-imeyile ngapha nangapha kwakukwimeko yayo. Nangona kunjalo, njengoko yayihambele phambili njengoko yayilixesha layo, i-R380 ayinakuba neeapps ezongezelelweyo ezifakwe kuyo.
Kwaye ezi, bafo, yayizii-smartphones zokuqala ezabonwa lihlabathi. Sivela kude kakhulu ukusukela ngoko, asiyiyo? Siphose umgca kwizimvo ezingezantsi ukuba uyavuma.
izikhombisi: IBM uSimon (Wikipedia), Fudder.de , cdecas.free.fr
pixel xl umkhuseli weglasi wekhusi
Ungayicima njani iVidiyo yeBakala yeXesha leVidiyo kwiApple iPad Pro (2021)